Aung's Investment: Investment Psychology 101
Posted by Aung Myo Htet at 10/12/2009 10:22:00 AM
nyimuyar October 12, 2009 2:38 PM
wow, absolutely right, those are all of my reasons to be afraid of Investment. (main reason is I don't have enought money to be starting)
NGUUNN October 12, 2009 4:19 PM
ကျနော့ ရဲ့ အကြောင်းပြချက် ကလည်း အချိန်မရသေးလို့ရယ်၊ နဲ့ ပိုက်ဆံမရှိဘူး ဆိုတာရယ်ပါ။ ခုတော့ ဟိုလှန်ဒီရှာနဲ့ Aunginvestment blog ကိုတွေ့ရတာပါပဲ။ Robert Kiyosaki ရဲ့ Rich Dad, Poor Dad ကစလို့ financial education ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာခဲ့ရတာ။ နှောင်းတော့ မနှောင်းသေးပါဘူးလေ။ အကိုပြောသလို mindset ကို နည်းနည်းစီ စပြောင်းကြည့်ရမယ်။
Ko Myo (SG) October 13, 2009 8:11 AM
A good post indeed. Well written in educative but easy-to-understand approach.
I am looking forward to reading more of your posts in the nitty-gritty details of investment techniques as well as some DOs & DON'Ts based on your experience.
Aung Myo Htet October 14, 2009 9:15 AM
Robert Kiyosakiဟာ Motivational Speakerပါ။ သူဟာ 3Mထဲက Mindsetကို Targetထားပြီး Educateလုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့စာအုပ်တွေဟာ How-toတွေမပါဘူးလို့ တခါတလေ ဝေဖန်ခံရတတ်ပါတယ်။ သူ့မှာ 3Mလုံး Provideလုပ်ဖို့ တာဝန်မရှိပါဘူး။ ကိုယ်က ကိုယ်လိုတာတွေကို Different Sourceတွေကနေ ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
Zaw Fx August 19, 2015 8:06 PM
အစ်ကိုရေ....ကျနော့် blog မှာ ကူးယူဖော်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျ။ အောက်မှာ ဒီ blog ကို ညွှန်းပေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Aung Myo Htet August 19, 2015 8:13 PM
It's ok. all yours.